Nhau - Kukosha kwehutano hweSesame paste
1. Sesame paste (Tahini paste) yakafuma mumapuroteni, amino acids, mavitamini uye zvicherwa, uye ine hutano hwakanyanya kukosha.
2.Calcium ine samee paste yakakwira zvakanyanya kupfuura miriwo uye bhinzi, kechipiri kune shrimp ganda. Izvo zvinobatsira mukukudziridzwa kwemapfupa nemeno kana zvichidyiwa nguva dzose (usadya nesipinashi nemimwe miriwo, zvikasadaro kuora kwakapetwa kwe oxalate kana kusungunuka oxalate mumiriwo kunogadzira calcium oxalate precipitate, iyo inokanganisa kuwedzerwa kwecalcium).
3. Sesame namatidza simbi inoverengeka zvakapetwa kupfuura chiropa, zai yolk, kazhinji idya kwete chete ine hunhu hwakanaka pakuchinja kweanorexia isina kukwana, asiwo kugadzirisa nekudzivirira kushomeka kwesimbi kushomeka.
4. Tahini yakafuma mu lecithin, iyo inodzivirira vhudzi kubva kuchena kana kudonha nguva isati yakwana.
5. Sesame ine mafuta akawanda, ine basa rakanaka rekuzorodza ura.
Mhedzisiro uye basa reesame peta:
1. Wedzera chido chako. Sesame peta inogona kusimudzira chishuwo, ichiwedzera kunakira kunwiwa kwemasaini ebhodhi.
2. Kunonoka kukwegura. Sesame paste ine 70% vhitamini E, ine antioxidant inoshanda, inogona kuchengetedza chiropa, kuchengetedza moyo uye kunonoka kukwegura.
3. Dzivirira kurasikirwa nevhudzi. Nhema dzesame mhodzi dzakapfuma mu biotin, inova yakanakira kurasikirwa nevhudzi kunokonzerwa nekushaya simba uye kukwegura kusati kwasvika, pamwe nekurapwa kwemvere nevhudzi rinokonzerwa nezvimwe zvirwere.
4. Wedzera ganda kuomarara. Kudya tahini nguva dzose kunogona zvakare kuwedzera ganda kusununguka.
5. Pfumisa ropa. Kugara uchidya tahini paste haingori chete nemhedzisiro pane kugadziriswa kwekusarura kudya anorexia, asi zvakare kunogona kudzivirira kushomeka kwesimbi anemia.
6. Kurudzira kukura kwemapfupa. Iyo calcium inowanikwa mune tahini paste yakanyanyisa kukwirisa, yechipiri chete kune shrimp ganda, kazhinji inodyiwa inobatsira mukuvandudza kwemapfupa nemeno. Mbeu yeSesame ine mafuta mazhinji, ayo ane maitiro akanaka ekunyorovesa ura uye kubvisa kuzvimbirwa.
Ladyfinger Cookie, Vana Mabhisikiti, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Hawthorn Strip, Mutsva Bean Curd Stick, Soy Sauce Mapaketi,